အာရေဗျပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမုန်တိုင်းအမည်များ « MMWeather Information BLOG
« ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းမှ 99W နှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် »
By mmweather.ygn, on June 11th, 2014
အစပိုင်းတွင် မုန်တိုင်း အမည်များကို အဆင်ပြေသလို ပေးခဲ့ကြသော်လည်း ၂ဝ ရာစု အလယ်ပိုင်းမှ စတင်၍ မုန်တိုင်းများ၏အမည်ကို အမျိုးသမီးအမည်များ ပေးခဲ့ကြကြောင်း၊ မိုးလေဝသပညာရှင်များက ထိုအမည်များကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာစဉ်အလိုက် (ဥပမာ – A=Anne – နှစ်တစ်နှစ်အတွက် ပထမဦးဆုံး စတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် မုန်တိုင်း) အမည်ပေးရန် နောက်ပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ၁၉၅၃ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၌ဖြစ်ပေါ်သော မုန်တိုင်းများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မိုးလေဝသအဖွဲ့၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကော်မီတီက ယခုအချိန်အထိ သတ်မှတ်ခြင်း နာမည်အသစ်စုဆောင်းခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
ထိုမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် သတ်မှတ်တင်ပြပေးသည့် မုန်တိုင်းအမည်များကို မုန်တိုင်းအန္တရာယ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုများ၊ ဘေးအန္တရာယ်သင့်ခြင်း လျော့နည်းစေရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်မှုရှိစေရေးအတွက် ဆက်လက်ကျင့်သုံးလာခဲ့ကြပါသည်။
မုန်တိုင်းအမည်များကို ဒေသအလိုက်သတ်မှတ်တင်ပြရာတွင် အောက်ပါအချက်များနှင့် ပြည့်စုံမှု ရှိရမည်ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည် –
• It would help identify each individual tropical cyclone. (မုန်တိုင်းတစ်ခုစီ၏ အမည်များအား သိမှတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်)
• It helps the public to become fully aware of its development. (မုန်တိုင်း တစ်ခု အင်အား တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်မှု အခြေအနေကို ပြည်သူလူထုမှ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိနားလည်စေရန်)
• Local and international media become focused to the tropical cyclone. (ပြည်တွင်း ပြည်ပ မီဒီယာများမှာ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်းသတင်းရေးသားကြရာတွင် တိကျသည့် ခန့်မှန်းရေးသားမှုများ ဖြစ်စေရန်)
• It does not confuse the public when there is more than one tropical cyclone in the same area. (ဒေသအတွက် မုန်တိုင်း တစ်ခုထက် ပိုမို ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပါက မုန်တိုင်းများအကြား နားလည်မှု ရှုပ်ထွေးမသွားစေရန်)
• The name of the tropical cyclone is well remembered by million of people as it is unforgettable event shoes name will long be remembered. (သန်းပေါင်းများစွာသော ကမ္ဘာ့ပြည်သူလူထုမှ မုန်တိုင်း တစ်ခုအမည်ကို ကောင်းစွာ မှတ်မိ သိရှိနိုင်စေရန်)
• Warnings reachamuch wider audience very rapidly. (မုန်တိုင်းသတိပေးထုတ်ပြန်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာ ဒေသအလိုက် လျှင်မြန်စွာ ရောက်ရှိပြန့်နှံ့စေရန်)
“The WMO/ESCAP Panel on Tropical Cyclones at its twenty-seventh Session held in 2000 in Muscat, Sultanate of Oman agreed in principal to assign names to the tropical cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea” အရ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ မြောက်ပိုင်း၊ အာရေဗျပင်လယ်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မုန်တိုင်းများအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည်ပေးခြင်းကို ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။
ဒေသတွင်းမှ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ(၈)နိုင်ငံ – ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ မော်လဒိုက်၊ မြန်မာ၊ အိုမန်၊ ပါကစ္စတန်၊ သီရိလင်္ကာနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ တို့မှ သတ်မှတ်ပေးသော မုန်တိုင်းအမည်များကို ကော်လံ ၈ ခုခွဲခြားထားပြီး၊ ကော်လံ(၁) ပထမ စာကြောင်းပါ အမည်မှ စတင်၍ ကော်လံအမှတ်(၈) အောက်ဆုံးစာကြောင်းပါ အမည်အထိ တစ်ခုစီအသုံးပြုသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း Regional Specialised Meteorological Centre(RSMC) ဖြစ်သည့် အိန္ဒိယ မိုးလေဝသဌာန(နယူးဒေလီ)မှ
ဒေသတွင်းနိုင်ငံများမှ ပေးသည့် အမည်စာရင်းအား ကော်လံများခွဲခြား၍ ပြုစုသတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။ ယခုအချိန်အထိ ပေးပြီးမုန်တိုင်းအမည်များကို အရောင်ဖြင့် high-light လုပ်ပေးထားပါသည်။ (ပုံတွင် ကြည့်ပါ)
မှတ်ချက် ယခု အာရေဗျပင်လယ်တွင် INVEST 95A မှ ပိုမိုအင်အားကောင်းလာပြီး ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဆင့်ရောက်လာသည့် 02A(TWO)ကို အလှည့်ကျ မြန်မာအမည် “နွားနောက်-Nanauk”ဟု ပေးထားပြီဖြစ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး Cyclone Naming, ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်, အာရေဗျပင်လယ် « ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းမှ 99W နှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် »
« ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် အရှေ့ပိုင်းမှ 99W နှင့် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင် အခြေအနေ GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် »	Copyright © 2017 MMWeather Information BLOG Log in - All Rights ReservedPowered by WordPress & the Atahualpa Theme by BytesForAll. Discuss on our WP Forum